Rugare. Ndezvipi zvikonzero zvekuchaja vakadzi chifukidziro chemusoro \_ - Rabbi Michael Avraham
Rugare. Ndezvipi zvikonzero zvekuchaja musoro wevakadzi \_
Responsa > Category: Halacha > Rugare. Ndezvipi zvikonzero zvekuchaja musoro wevakadzi \_
Izirayeri Yakabvunzwa makore matatu apfuura
Rugare. Parutivi rwehurukuro pamusoro pekuvhara kwakanaka kwebvudzi remusoro wemukadzi, ona kudiwa 1, ndakaona kuti Amos Bracha akabudisa kuti mutsamba yako kwaari iwe wakanyora \_ "kuti mvumo pachayo ine nzvimbo" (asi kwete zvachose kubva kuzvikonzero zvaRabhi Mashash). Uye maJapan echinyorwa chako chiri pamusoro.
Mushure mekuongorora, pamwe iwe unogona kundinzwisisa kupi mune yako chinyorwa ipapo, kana zvachose, iwe wakanyora zvikonzero?
Yetsamba yako ona google.com/view/minagshelkishot Ongororo
Uye makorokoto kubhuku renyu.
Mibvunzo ma tag: Headdress
mikyab Vashandi Akapindura 4 years ago
Handina kunyora nharo dzacho nekuti yaisava nyaya yekurukurirano. Nyaya yacho yaitaura nezvenharo dzaRabhi Mashash.
Join vamwe 3,095 vanyoreri
Zvichida inguva yekudzokorora tsika?
Mhando dzose dze.
RAAM uye "Takia"
Kana kana On Kusimuka nekudonha kwaBennett uye Zvazvinoreva (Koramu 486)
Uye imba yechitatu On Kusimuka nekudonha kwaBennett uye Zvazvinoreva (Koramu 486)
Kudzoreredza 'kwekodzero' kuchabvumira dzimba mbiri dzezvematongerwo enyika kune miviri miviri yevanhu vechitendero chenyika On Kusimuka nekudonha kwaBennett uye Zvazvinoreva (Koramu 486)
Elhanan On Mhinduro yemarudzi ese.
7 Kuchenesa pazvisingadiwi On Mhinduro yekuchena kwemhuri